Sawiro: Bristol Horn Youth Concern oo soo gabogabaysay tartarn ciyaareedkii sanadka 2015/2016 |
Sawiro: Bristol Horn Youth Concern oo soo gabogabaysay tartarn ciyaareedkii sanadka 2015/2016
Bristol (Gabiley.net) Waxa magaalada Bristol lagu soo gabo gabeeyey tartarn ciyaareed socday ilaa sanadkii hore, waxaanay guushu ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca Amana.
Ururka Bristol Horn youth concern oo ah urur dhalinyaro aad u firfircoon kana qayb qaata kobcinta dhallinyarada iyo la dagaalanka mukhaadaaradka ee magaalada Bristol ayaa sidii caadiga u ahayd sanad kasta soo qaban qaabiya koobka dhalinyarada ciyaaraha ee lagu magacaabay sanadkan 7v7 oo koox waliba ay ku ciyaarayeen toddoba ciyaaryahan.
Koobkan oo ay ka soo qayb galeen toban kooxood oo socday ilaa November sanadkii hore (Nov 2015) oo ay dhammaan kooxuhu is wada arkayeen.
Haddaba xafladii koobka lagu guddoonsiinayay kooxda Amana waxa ka soo qayb galay Guddoomiyaha Ururka Bristol Horn Youth Concern Mr. Khalil Abdi Liqe oo hadal dardaaran iyo dhiirigelin ah ka jeediyey xafladii iyo sida uu ugu faraxsan yahay in uu arko koobkii mudada badan socday oo la kala qaaday, ballanqaadayna in aanu urur ahaan waxba kala hakran doonin dhalinyarada.
Sidoo kale waxa uu sheegay in koobkan dhigistiisa ay faa’iido u tahay dhalinyarada waayo waxa muhiim in ah ayuu yidhi “In aynu dhalinyaradeena soo koraysa aynu wadooyinka ka kaxayno oo ku dhiiri gelino sidii ay kubada u ciyaari lahaayeen oo caafimaad ahaan iyo dhaqan ahaanba wanaagsan.
Waxa kale oo uu ku deeqay oo uu mar walba la garab taagan yahay sidii uu dhalinyarada u gaadhsiin lahaan hadday tahay Dirayska lagu ciyaaro kubadaha, kabaha, biladaha koobabka iyo weliba sidii uga caawin lahaa Venue-yada la kiraysto.
Waxa isagana ka soo qayb galay xafladii koobka lagu guddoonsiinayay Kooxda Amana oo iyadu hantiday sanadka kooban Councilor Afzal SHAH oo laga soo doorto xaafadda ay Somalidu ku badan tahay ee EASTON ee magaaladda Bristol.
Waxa iyaguna xaflada shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey dhalinyaro iyo dad muxtarim ah kana shaqeeya sidii dhalinyarada Somalida loo horumarin lahaa.
Sidoo kale waxa xaflada abaal marino lagu guddoonsiiyey ciyaaryahankii ugu goolal dhalinta badnaa intii wareegani socday, kii ugu akhlaaqda fiicnaa iyo waliba difaacii la mari waayay intii koobku socday.
Ugu danbayn waxa kooxda Kubada Cagata Amana koobkii ku wareejiye Mr. Abdul Ahmed oo ah guddoomiyaha Somali Forum ee Bristol aadna ula dhacay qaabka ay xafladu u dhacday, wuxuuna ku kooxdii lagu badiyey iyo kuwa badiyey inay ciyaarahooda halkaa ka sii wadaan si ay mustaqbal fiican u gaadhaan, wuxuuna Ilaahay uga baryay dhammaantood in xirfadooda ciyaareed Ilaahay kaalin wanaagsan ka gaadhsiiyo.